۩ शङ्कर लामिछाने स्मृति घर: क्याट माने बिरालो
Posted by Jotare Dhaiba at 1:32 AM
Basanta June 5, 2009 at 6:02 AM
वाह! क्या दामी निबन्ध पढ्न पाईयो! पहिला पढ्ने सौभाग्य मिलेको थिएन। धन्यबाद!
दीपक जडित June 5, 2009 at 2:06 PM
धन्यवाद धाईबाजी शङ्करका पढ्न नपाएका रचनाहरु जुटाईदिनुभएकोमा ।
Jotare Dhaiba June 5, 2009 at 5:13 PM
धन्यवाद शङ्करप्रेमीद्वयलाई !
देखेर पनि देख्‍न नभ्याइरहेको सूक्ष्म दैनिक चटनाक्रमलाई साहित्यिक सेपमा ल्याउने शङ्करको खुबी यस निबन्धमा पनि दैख्‍न सकिन्छ । साहित्यिकता, सिङ्गो मूल भाव र शैलीगत चटकबाट यस निबन्धले मन लुटे पनि तर एउटा कुरामा भने शङ्करप्रति विमति राख्छु म यस लेखमा । जस्तो कि पुछारतिर भनेका छन् उनले- "आज अनुभव हुन्छ जीवन पुन: आरम्भ गर्न पाए अनेक कुरा जो जान्नुपर्ने थियो र जो छुटिरहेको छ...... ।" यो भाव अहिलेको (अर्थात् परिपक्वताको स्थितिमा) आएको विवेकशील सोच मात्र हो । र फर्किएर जीवन फेरि बालापन वा सुरुको अवस्थामा जाने हो भने उही काँचोपनमा अल्झिएर झिनामसिना कुराकै उलझधुलझमा परेर जान्नुपर्ने र मोड्नुपर्ने कति-कति कुरा छुट्नेछन् निश्‍चय नै । यही प्राकृतिकता हो । र यस्तो स्थितिलाई पुन जीवन आरम्भ गर्न पाएँ सच्याउँथेँ भन्नु मीठो काल्पनिकीको झिल्का सिवाय केही होइन ।
prawash June 5, 2009 at 10:16 PM
शंकर लामिछानेका मन नपरेका कुनै लेखन छैनन् । यो निबन्धमा पनि उस्तै दर्शन र विचार छन् अनि धाइवाजीको जुन तर्क निस्केको छ त्यो पनि अति परिपक्क पाठकले मात्र गर्न सक्छ भन्ने लाग्यो। हामी अन्धभक्त पाठक बन्नु हुँदैन पनि। 'बडाले जो गर्‍यो काम हुन्छ त्यो सर्वसम्मत। छैन शंकरको नंगा मगन्ते भेष निन्दित ।। ' नहोस्।
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) June 6, 2009 at 2:23 AM
सर्ब प्रथम त माफ गर्नु होला निकै समय पछि यो स्मृति घरमा छिरेकोमा | झण्डै भुलेको -
निकै समय को अन्तरालमा छिरेको त निकै - मिठो खुराक चाख्न पाइयो धन्यबाद ! तपाईको लक्ष्य पुराहोस |
bhupendra khadka June 6, 2009 at 3:05 AM
shankar lamichhne aafnaima MAHAN SHRASTRA hun kasaile gali ra tali dinupardaina saaathi.....baru sabailai ramrari padhana salhha dinus.
Jotare Dhaiba June 6, 2009 at 3:05 AM
आभार अर्का प्रेमीद्वयलाई ।
शङ्कर स्मृति घरमा अनुज जीको प्रथम पाइलालाई स्वागत छ गर्दै यथाशक्य स्वच्छ साहित्यको वेगमा चाल मारिरहने विश्‍वास दिलाउँछु । यसको लागि खुला विश्‍लेषणले हामीबीच बहसको रूप लिँदै जानेछ भन्ने आशा पनि छ ।
वेदनाथ जी, स्मृति घर आफैँ विस्मृतिको लामो निद्रपछि पुन: ब्युँझिएको छ, तपाईँ मित्रजनलाई छाडेर यो कहाँ पो छलाङ लगाउन जाने हो र ? सल्लाह-सहयोग जारी रहोस् । शुभेच्छाका लागि धन्यवाद !
Jotare Dhaiba June 6, 2009 at 3:17 AM
भुपेन्द्र जी, मनकारी कुरा राख्‍नुभयो, शङ्करको महान्‌तामा शङ्का छैन । यस ब्लगको जन्म हुनुको कारण पनि उनकै विशिष्‍ट योगदानको सानोतिनो आराधन हो ।
तपाईँले कमेन्ट बक्समाथिको आह्वान पढेर आफ्नो भनाइ राख्‍नुभएको हो भने गाली र तालीको अर्थ त्यति कडा रूपमा पनि नबुझिदिनुहोला । विश्‍लेषण र बहसको ढोका कस्तै महान्‌ र अद्वितीय प्रतिभाको हकमा पनि बन्द हुँदैन । चर्चा र क्रिया-प्रतिक्रियाले स्रष्‍टाको महान्‌तामा ठेस पुग्दैन, बरू उनलाई थप बुझ्न र बहुआयामिकतामा हेर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।
तपाईँको टिप्पणीको लागि धेरै धन्यवाद । फेरि-फेरि पनि राय दिनुहोला ।
Anonymous June 6, 2009 at 4:25 AM
interesting and artistic...
यस्तो बिरालो मैले नेपालमा देखेको थिएन । जे होस् लेख राम्रो जानकारीमूलक लाग्यो ।
दिनेश राज June 9, 2009 at 4:39 PM
यो निबन्ध मैले पहिलो चोटी पढेको जस्तो लाग्यो , अबसर जुराईदिनु भएकोमा धाइबा जीलाई धन्यबाद ।
Ma Nepali July 17, 2009 at 2:14 PM
really true ...after i reading this cat क्याट माने बिरालो i feel like i learned somthing different and unique thing ..i cannt expalin it right now...i should have read it befor...
Sabitra September 12, 2009 at 12:17 PM
There is no words that can express the depth of sentiments and feelings which could respect the great contribution. It is good that we as readers can follow the same depth of the emotions while reading. This is what I think today's writer should learn from him, to give the words which really touch the heart of readers.
TRUE LIFE'S JOURNEY September 12, 2009 at 4:26 PM
अर्को कुरा जो मैले थाहा पाएँ, त्यो थियो सहवासको आवश्यकताले प्राकृतिक शत्रुता पनि सेलाउँदो रहेछ । मैले यहाँनिर राम्रो सँग बुझ्न सकिन ।
यसपछि सहवासका कारण शत्रुता शुरु हुने कुरा छ ।
लेखाइ राम्रो छ । हुनसक्छ , यो त्यतिबेलाको शिक्षा प्रणाली प्रिती उनको आक्रोश । अवश्य पनि प्रयोगात्मक शिक्षा सिक्न सजिलो हुन्छ नै ।
समयले फड्को मारिसकेको छ ,मारिरहेको छ । हामी अझै कोक्रोमा लोरी सुन्दैछौँ । वास्तवमा मान्छे धेरै पछाडि छ। खासगरी हामी पछी छौं। खै हाम्रो दौड (युग सँगको ,समय सँगको र सभ्यता सँगको)कहिले सुरु हुने हो! दर्शन र जीवनोपायोगी जानकारी हरु यत्रतत्र छन् । हामीमा जीवन बुझ्ने सुक्ष्म ज्ञान हुने हो भने त्यो ज्ञान हाम्रै ओरिपरी छ । टाढा पुग्नु पर्दैन । घोकन्ते प्रब्रित्ती मा रूमलि रहेका हामी बुझन्ते प्रब्रित्तिमा लाग्नु पर्ने हो जो गरिरहेका छैनौँ।
यो लेख शंकर दाई को तर्फबाट समग्र मानव समाजका निमित्त दिईएको पारदर्शी चश्मा हो । मैले यही बुझेँ। धन्यवाद धाइबा !!